Wax ka baro Taariikhda dalka Liberia. | Ilwareed Online
Home WARKA DALKA Wax ka baro Taariikhda dalka Liberia.
Wax ka baro Taariikhda dalka Liberia.
Dalka Liberia waxaa loo yaqaan jamhuuriyadda Liberia waxaana uu ku yaala galbeedka qaaradda Africa, Wuxuuna xaduud la leeyahay dalalka Sierra Leone, Guinea iyo Ivory Coast.
Tiradda dadka liberianka ah waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 5 million oo ruux caasimada dalkana waxaa la yiraahdaa Manarovia oo sidoo kalena ah magaaladda dalka ugu weyn.
Luuqadda rasmiga ah ee dawladu aqoonsatahay waa Af Ingiriis ah hase ahaatee illaa 20 luuqadood oo kale ayaa dalkaasi looga hadlaa.
Dalkaan waxaa loo aqoonsanyahay dalkii ugu horeeyay Africa ee noqda dal madax banaan waxaana uu xorriyadiisa qaatay sanadku markuu ahaa 1822 hase ahaatee Maraykanka ayaa dawladinimada dalka Liberia aqoonsaday 26 July sanadkii 1847 sidoo kale waa dalkii ugu horeeyay ee Africa ku yaala oo gumaystihii Ingiriisku u aqoonsado dal madaxbanaan.
Dadka madow ee Maraykanka degen badankood taariikhyahanadu waxay aaminsanyihiin inay asal ahaan kasoo jeedaan dalka Liberia waxaana Maraykanka la geeyay waqtigii dagaalka sokeeye Maraykanku ka socday.
Taariikhdu waxay qortaa dawladihii dalkaan aanu ka hadlayno ee Liberia soo maray inay saameyn weyn ku lahaayeen dagaaladii dunnida ka dhacay sida dagaalkii 1,aad ee dunnida.
Xukuumaddii xilligaas Liberia ka jirtay waxay la safatay dawladii Maraykanka.
Sidoo kale dawladihii soo maray Liberia waxay goob jog u ahaayeen ama xataa xubno ka ahaayeen dawladihii aas aasay ururkii wadamada midoobay ee hadda Q,M loo yaqaan iyo ururkii midnimada Africa ee hadda Midawga Africa la yiraahdo.
Dagaalo sokeeye oo ka dhashay oo afgambi 1980 ka dhacay dalkaasi waxaa uu galaaftay nolosha 250, kun oo ruux waxaana barakacay qiyaastii 8% dadka wadankaas.
Wada hadal nabadeed oo sanadkii 2003 la iskugu keenay dhinacyadii is hayay waxaa ay keentay in la aas aaso dawladda hadda jirta.
Dawladii heeshiiskaas ka dhalatay waxay keentay in dalkaan ay haweeney M/weyne ka noqoto waxaana uu noqday dalkii ugu horeeyay ee African ah oo haweeney madax ka noqoto.
Ellen Johnson Sirleaf muddo 12 sanno ah ayay ku fadhisay kursiga madaxtinimada hadda ayaana dalkaasi doorasho laga galayaa si loo soo doorto hogaamiyihii badali lahaa.
Hogaamiyaasha la xasuusto ee dalkaasi soo maray waxaa ka mid ahaa Jarles Taylor oo hadda u xiran dambiyo dagaal oo uu galay intii uu xilka hayay.
Dastuurka hadda dawladu ku shaqayso waxaa la qoray 1986.
Lacagta dalkaan laga isticmaalo waxaa la yiraahdaa Liberian Dollar gaadiidkuna waxay isku dhaafaan dhanka midig.
Taariikhyahanadu waxay aaminsanyihiin in dalkaan la degay laga soo bilaabo sanadku markuu ahaa 1461 illaa laga soo gaaro qarnigii 17,aad.
Ganacsato u dhalatay dalalka Bortaqiiska, Holland iyo ingiriiska ayaa la aaminsanyahay inay u doonaan jireen bas baaska maadaama waagii hore dalkaasi loo yaqaan dhuulkii bas baaska.
Dhanka dhaqaalaha marka loo eego dalkaan waxaa uu ka mid yahay wadamada Africa ugu faqrisan waxaana heerka shaqo la’aantu ka joogtaa 15%.
Dhaqaalaha ugu badan dawladu waxay ka heshaa maalgalinta ay ajaanibtu dalka ku sameystaan iyo dhoofinta dallagyadda dalkaasi kasoo go’da.
Musuq maasuqa oo ay dawladda hadda jirtaa la dagaalanto ayaana la aaminsanyahay inay sabab u tahay faqriga baahsan ee Liberia ka jira.
Dalkaan aanu ka hadlayno waa dalka labaad ee ay ku safraan maraakiibta calankiis wata waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Panama.
Qiyaastii 3500 oo marab oo wata calanka Liberia ayaa dunnida oo dhan ku safra taasoo ka dhigan in 11% maraakiibta badda ku safra ay wataan calanka Liberia.
Dhanka isgaarsiintana dalkaan waxaa uu ka mid yahay wadamada aad looga adeegsado isgaarsiinta casriga ah qiyaastiina 45% bulshadda dalkaas waxay isticmalaan taleefoonka gacanta.
Xagga diimahana dadka ugu badan ee dalkaas dawladu waxay aaminsantahay in masiixiyiin yihiin Muslimiintuna waxay ka yihiin 12%.
Islamka waxaa la aaminsanyahay inuu dalkaasi gaaray qarnigii 16,aad wax yar kadib markii ay bur burtay boqortooyaddii Soonqaay ee ka jirtay dalka Mali.
Dhaqanka marka aanu eegnana dadka wadankaan waxay dhaqanka la wadaagaan dadka Africa sidoo kalena gabdhaha da’da yare e la guursado ayaana dalkaan ku badan.
Ninka qaan gaarka ah dastuurka dalka Liberia waxaa uu u ogolyahay inuu guursan karo 4 xaas.
Xagga cayaarahana xulka qaranka dalka Liberia inkastoo ay waligood koob aduun qaadin haddana dhawr mar ayay ka qeyb galeen cayaaraha adduunka ee FIFA maal galiso.
Cayaartoyda ugu caansan ee dalkaan u dhashanayna waxaa ka md ah Goerge Weah oo haddana ka mid ah musharaxiinta doonaya inay talada dalkaasi qabtaan.
Previous articleISS Today: How the Gulf crisis is destabilising Somalia
Next articleRa’iisal Wsaare Kheyre: “Marnaba Nalama Cabsi Gelin Karo..”